29 August 2015 16:27
Shirqoolka lala maagan yahay Maamulka Jubaland State of Somalia 10/10/2012
Warar lagu kalsoon yahay oo aanu ka helnay ilo ku dhow-dhow madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxay xaqiijunayaan jiritaanka shirar badan oo isdaba jog ah oo dhammaantood ku wajahan Jubooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo iyo waxa laga yeelayo.
Kismaayo oo hadalhaynteedu aad u badatay ayaa noqotay magaalo ay cid waliba iska sheegato balse xanuunka u wayni uu hayo magaalada Muqdisho oo dad badani hurdadiiba kaga tagtay qabashadeeda laga qabtay ururka Alshabaab laba todobaad kahor uun.
Waxay wararku sheegayaan inay jiraan talaabooyin soo kala horeeya oo marba mid la doonayo in lagu dayo arinta Kismaayo iyo maamulka Jubaland State oo hadda maraya heer gabo-gabo ah. Madaxwaynaha ayaa shacabka Jubaland ku baraarujiyay in dowladdu ay Kismaayo maamul u samaynayso halka Belewayn iyo Baydhabo laga dalbaday in ay ayagu xor u yihiin inay soo samaystaan maamul ay u madax banaan yihiin.
Marka hore waxaa la isku dayi doonaa in la isticmaalo hab maamul sida isku badal saraakiil iyo ciidamo si loo abuuro ciidamo qabiil oo huwan shaar dowladeed kuwaasoo hadafka laga leeyahay ay tahay qas abuur iyo inay dowlada madaxwayne Xasan hesho qaab ay u hirgashato sida ay rabto Kismaayo-na ay ku noqoto meel la isku haysto oo sharci gaar ah loogu sameeyo.
Hadday taasi socon waydo waxaa khiyaar labaad noqon kara bixin lacago laaluush iyo xilal loo magacaabo gobolada Jubooyinka iyo Gedo si looga hortago maamul goboleedka Jubaland State ee ay shacabka goboladaasi ku guda jiraan dhamaystirkiisa.
Hadday taasi socon waydo waxaa la qorshaystay in la hubeeyo maliishiyaad magac dowladeed wata ayna hormuud ka yihiin walaalaha Galgaduud kuwaasoo dagaal ku ekayn doona ciidamada huwanta ee xoreeyay Kismaayo. Waxaa maliishiyaadkan qayb ka noqon kara xubno badan oo ka tirsanaa Shabaabkii hore oo dharka badashay.
Hadday taasi shaqayn waydo waxaa la soo diri doonaa ganacsato wadata lacag aad u farabadan kuwaasoo dhulalka istaraatiijiga ah iyo beeraha kala wareega dadka. Qorshahani waa kii ay Isra�iliyiintu ku sameeyeen Falastiiniyiinta mid la mid ah. Hadaba waxaa looga digayaa muwaadiniinta saddexda gobol in ay ka digtoonaadaan shirqoolada lala damacsan yahay. Waxaa kaloo loogu baaqay inay adkeeyaan midnimada dhexdooda ah.